ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: March 2012
စားသတိ၊ သွားသတိ၊ နေသတိ ရှိစေဖို့ ...
နည်းပညာအသစ်အဆန်းတွေ တစ်နေ့ တစ်မျိူး မရိုးနိုင်လောက်အောင် ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ နည်းပညာ
ခေတ်ကြီးမှာ အမျိူးသမီးတွေသတိထားနိုင်ဖို့ ( အမျိူးသားတွေလည်းပါသပေါ့ လေ...) ၊ အသွားအလာ
အနေအထိုင်ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ မိမိရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ လျှိူ့ ဝှက်အပ်တဲ့ ကိစ္စတွေ တစ်ကမ္ဘာလုံး မသိစေ
ဖို့ အတွက် နောက်ဆုံးပေါ် လျှိူ့ ဝှက်ကင်မရာများ မည်သို့ တပ်ဆင်ကာ ထောက်လှမ်းရိုက်ကူးထားနိုင်
နည်းပညာများကတော့ အစုံပါပဲ...ယခုပုံများသာမမြင်တွေ့ ဖူးပါက ပြောလို့ ပင်ယုံနိုင်ဖွယ်မရှိပါဘူး...
Posted by Unknown | at 2:37 AM | 1 comments
Racehorse has won 19 times and €100,000 in prize money despite being blind
ယူရိုတစ်သိန်းအထိဆုရခဲ့ သည့် ပြိုင်ပွဲ ၁၉ ပွဲနိုင် မြင်းမျက်ကန်း...
လက်ဂ်ဟက် အမည်ရှိ အသက် ၉ နှစ်သား အီတလီပြိုင်မြင်းဟာ မယုံကြည်နိုင်လောက်ဖွယ်အံ့ သြစရာ
ကောင်းလောက်အောင် ပြိုင်ပွဲ ၁၉ ပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့ သည့် မျက်စေ့ ကန်းနေသည့်မြင်းတစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်..
အီတလီဘာသာစကားဖြင့် " ငကန် " ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည့် လက်ဂ်ဟက် ဟာ မွေးဖွားခဲ့ စဉ်ကပင်၎င်း၏မျက်
စေ့ နှစ်လုံးစလုံး ရောဂါပိုးမွှားကူးစက်မှုကြောင့် လုံးဝနီးပါးမမြင်ရပဲ ကန်းနေခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
သို့ သော်လည်း သူဟာ မွေးရာပါကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းချိူ့ တဲ့ နေသည့်တိုင် သူ့ အားစီးနင်းသည့် ဂျော်ကီ
နှင့် လောင်းကစားသူများအားလုံး အံ့ အားသင့် ဖွယ်ကောင်းအောင်ပင် ဆုကြေးငွေ ယူရို ၁ သိန်း နီးပါးအထိအနိုင်ရအောင် ပြေးနိုင်ခဲ့ ပါတယ်...
ပီစာဒေသအနီး၊ ဆန်ရိုဆိုရီ အရပ်တွင် အခြေစိုက်နေထိုင်သည့် မြင်း လက်ဂ်ဟက် အား ပိုင်ရှင် ဖက်ဒရီကို
ဒီပိုလာ ကိုယ်တိုင် လေ့ ကျင့် မောင်းနှင်ပေးခဲ့ ပြီး ထိုမြင်းနှင့် အတူ မြင်းဇောင်းတွင် သူ၏ချစ်သူဟု နောက်
ပြောင်ခေါ်ဝေါ်သည့် မြင်းမ တစ်ကောင်လည်း ရှိနေခဲ့ ပါတယ်...
ထိုမြင်းအနေဖြင့် တစ်ခြားပြိုင်မြင်းများကိုကျော်ဖြတ်ကာ ပန်းဝင်ခါနီးအထိမည်သို့ မည်ပုံတစ်ရှိန်ထိုးပြေးနိုင်
ခဲ့ သည်ကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ပင် တစ်အံ့ တစ်သြဖြင့် နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ ရပါတယ်...
ပြိုင်ပွဲတိုင်းအနိုင်ရနေသည့် မျက်ကန်းမြင်း " ငကန် "
" ဒါဟာတစ်ကယ့် ကိုအံ့ သြစရာကောင်းလှပါတယ်...သူဘယ်လိုများပြေးလိုက်သလည်းဆိုတာ ကျွန်တော်
ဖြင့် မသိနိုင်အောင်ပါပဲ...မွေးကတည်းက မျက်စေ့ နှစ်ဖက်စလုံး ပိုးဝင်ပြီး စုံလုံးကန်းနီးပါးဖြစ်နေခဲ့ တာပါ...
အရိပ်တွေကြည့် ပြီးတော့ ပဲသွားလာနိုင်ခဲ့ တာပါ...
ပြိုင်ပွဲတွေဝင်ခဲ့ တာကလည်း သူ့ အတွက်လေ့ ကျင့် ခန်းသဘောမျိူးဖြစ်အောင်ပါပဲ...ဒါပေမယ့် သူကတော့
နိုင်ပွဲတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်နေခဲ့ လို့် အံ့ သြခဲ့ ရပါတယ်...
သူဟာပြိုင်ပွဲပေါင်း ၁၉ ခုမှာနိုင်ခဲ့ ပြီး တစ်ချိူ့ ပွဲတွေဆိုယင် တစ်ကယ့် ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်...
ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာဆိုယင် သူဟာ ပထမဆုအဖြစ် ယူရို ၂၅၀၀၀ ဆွတ်ခူးခဲ့ ပါတယ်...
( ပြိုင်ပွဲမှာနိုင်အောင် )ဘယ်လိုပြေးရမယ်ဆိုတာသူ့ အလိုလိုသိနေပုံရပါတယ်...ပန်းဝင်ခါနီးလိုင်းကိုရောက်
တော့ မယ်ဆိုယင် သူကပဲကျွန်တော့် ကိုအချက်ပေးလို့ ထပ်ပြေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်က တွန်းရပါတယ်...
တစ်ချိူ့ ပွဲတွေမှာ ပြိုင်ပွဲဝင်မြင်းပေါင်း ၁၆ ကောင်နဲ့ တစ်ကွင်းထဲပတ်ပြိုင်နေခဲ့ တာတောင်မှ မည်သည့် ပြိုင်
ပွဲမှာမှ တစ်ခြားမြင်းနဲ့ တိုက်မိတာမရှိခဲ့ ပါဘူး...
ပြိုင်မြင်းစီးသူအဖြစ်နဲ့ ရော၊ မြင်းပိုင်ရှင်အဖြစ်နဲ့ ပါ ကျွန်တော့် ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ဒီလိုမြင်းမျိူး တစ်ခါမှ မ
ရှိခဲ့ ဖူးပါဘူး..." လို့ ဖယ်ဒရီကို ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
Laghat,anine-year-old Italian racehorse has won an incredible 19 times despite being blind. Laghat, whose name means 'kick', was born withafungal infection in both his eyes which left him virtually unable to see. But he has stunned his jockey owner and punters by overcoming the disability to win nearly 100,000 euro in prize money.
Based in San Rossore near Pisa, Laghat is owned and trained by jockey Federico De Paola and shares his stable withafellow horse jokingly described as 'his girlfriend'. His owner has no idea how he manages to steer clear of other horses when he competes and even kicks in with an extra burst off speed as he nears the finishing line.
Federico said: 'It's amazing. I really don't know how he does it. He hadafungal infection in his eyes when he was born and it has left him virtually blind. He can make out shadows but that's about it. I only entered him for the races because I thought it would be some exercise for him, but I was amazed when he won and he has kept on winning.
'He has won 19 races and some of them have been important ones - in one race he won the 25,000-euro top prize. He hasasixth sense which tells him where to put his legs - when we approach the finish line it's him who gives me the signal and gives me that extra burst of speed. We have never hadacrash with any of the other horses in any of the races we have been in and sometimes there can be as many as 16 inafield. I have never hadahorse like this before in my time asajockey and an owner.'
Posted by Unknown | at 1:54 AM |0comments
အင်ဒိုနီးရှားတွင်စကတ်တိုလျှင် မဖွယ်မရာဝတ်စားဆင်ယင်မှုအဖြစ် အရေးယူမည်...
အများပြည်သူမြင်ကွင်းတွင် မဖွယ်မရာဖော်ချွတ်ပြသမှု၊ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုများတိုက်ဖျက်ရေး
ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ ဖွဲ့ စည်းပြီးနောက် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် အမျိူးသမီးများ ဒူးအထက်ထိရောက်
အောင်တိုသည့် စကတ်များဝတ်ဆင်ခြင်းအား ဖော်ချွတ်ပြသသည့် အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်စေ
သည်ဟူသော သတ်မှတ်ချက်အဖြစ် ၎င်းတို့ ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွင် ထည့် သွင်းပြဌာန်း
မည်ဖြစ်ကြောင်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာသာရေး(သာသနာရေး) ၀န်ကြီး ဆူရာဒါမာအလီ ကပြော
" အများပြည်သူမြင်ကွင်းတွင် မဖွယ်မရာဖော်ချွတ်ပြသ၊ ၀တ်ဆင်ခြင်းဆိုတာ ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ
သတ်မှတ်မလည်းဆိုတာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ အနေနှင့် အဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးကတာဝန်ရှိသူများန
နှင့် တွေ့ ဆုံဖို့ စီစဉ်ပါဦးမယ်....ထိုအဖွဲ့ အစည်းတွေကနေ သဘောထားအမျိူးမျိူး တင်ပြကြမယ်ဆိုတာ
လည်းကျွန်တော့် အနေနှင့်အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ပါတယ်...
သို့ သော်ငြားလည်း ဒူးအထက်ထိရောက်အောင်စကတ်တိုတိုလေးဝတ်တာကိုတော့ မဖွယ်မရာ၊ အရှက်မဲ့ 
စွာ ဖော်ချွတ်ဝတ်ဆင်တာလို့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက လက်ခံကြရမယ့် စံနှုံးဖြစ်ရပါမယ်..." လို့ ဝန်ကြီးကပြော
ဆူရာဒါမာအား ထိုအဖွဲ့ အစည်းကိုနေ့ စဉ် စီမံအုပ်ချူပ်ကွပ်ကဲရန် သမ္မတကြီး ဆူဆီလိုဘန်ဘန်ယူဒိုယိုနို
ကိုယ်တိုင် ခန့် အပ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
အဖော်အချွတ်ဝတ်စားဆင်ယင်ပြသမှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်စံနှုံးများ အတည်ပြုပြီးတာနှင့် တစ်ပြိုင်နက်
တားဆီးနှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့ ဟာ တစ်နိုင်ငံလုံး လူမျိူးမရွေးစစ်ဆေးအရေးယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်း ၎င်းက
နိုင်ငံအနှံ့ အပြား ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုအခွေ၊စာအုပ်စာတမ်း၊ မီဒီယာများ သယ်ဆောင်ဖြန့် ဖြူးခြင်းအား တားဆီး
နိုင်ရန်သမ္မတကြီးအနေနှင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ပြဌာန်းခဲ့ သည့် လိင်မှုဆိုင်ရာညစ်ညမ်းဥပဒေအား အကောင်
အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် အဆိုပါ ဒုစရိုက်တားဆီးနှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့ အား မကြာသေးခင်က ဖွဲ့ စည်းပေးခဲ့ 
Following the establishment of an anti-pornography task force in Indonesia, Religious Affairs Minister Suryadharma Ali said that skirts that fall above the knee would be included in the working group's definition of pornography, on which it would base its future work.
"We will arrange meetings with different stakeholders from the public to get input on how they understand pornography, and I'm sure that they will come up with different definitions [of pornography]," he said.
"However, there must beaset of universal criteria to define something as pornographic, of which one will be when someone wearsaskirt above the knee."
Suryadharma was tapped by President Susilo Bambang Yudhoyono to run the body onadaily basis.
Posted by Unknown | at 1:09 AM |0comments
Labels: news: daily chilli
Jiangsu Village Gives Every Villager Gold and Silver Bars
တစ်ရွာမပြောင်း သူကောင်းမဖြစ်တဲ့ ...ပြောင်းကြစို့ အဲဒီရွာ...
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကျန်စုနယ်၊ ချန်ကျန်းရွာကြီးမှ ရွာသူ၊ ရွာသား ၃၀၀၀ ဟာတစ်ဦးလျှင် ရွှေ နှင့် ငွေ
များ ၁၀၀ ဂရမ် စီ ကိုလွန်ခဲ့ သည့် ရက်သတ္တပါတ်က အသီးသီးရရှိခဲ့ ကြလို့ တရုတ်နိုင်ငံမှ (ထို
သတင်းကိုကြားသိ၊ တွေ့ မြင်ဖတ်ရှုကြရသည့် ) အင်တာနက်၊ အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူများအားကျ
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ( ရွာသားများအားလုံး ယခုကဲ့သို့ ရွှေ၊ ငွေရတနာများ အမြတ်ဝေစုအဖြစ်ရရှိပါ
စေမည်ဟု ) ကျေးရွာပါတီအကြီးအကဲမှ ကတိပေးထားသည့် အတိုင်း ရွှေနှင့် ငွေ စုစုပေါင်း ကီလို၆၀၀ ကျော်အား ဝေငှပေးဖို့ ယန်စီမြစ်အတိုင်းသယ်ဆောင်လာခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ချန်ကျန်းရွာသားတွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်ဆုံး ( ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးအများဆုံး ) ကုမ္ပဏီ ၅၀၀
တွင်တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည့်ကျန်စု ရှင်ချန်ကျန်းအုပ်စု ကုမ္ပဏီကြီးအား ပိုင်ဆိုင်သည့် အစု
ရှယ်ရာဝင်များဖြစ်ပြီး ထိုကုမ္ပဏီသက်တမ်းကာလအတွင်း ရွာရှိမိသားစုတစ်ခုတိုင်း ကိုယ်ပိုင်
တိုက်အိမ်တစ်ခု၊ အချိူးကျရှယ်ယာဝေစုများအပြင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကလည်း ရွှေနှင့် ငွေများ အား
အကျိူးအမြတ်အဖြစ် ခွဲဝေယူခဲ့ ကြရပါသေးတယ်...
လွန်ခဲ့ သည့် ရက်သတ္တပါတ်က ခွဲဝေယူခဲ့ ကြရသည့် ရွှေငွေများကတော့ ကျေးရွာပါတီအကြီး
အကဲ လီလျန်ဘောင်း က ရွာသားတွေတစ်ယောက်မကျန် ရွှေတွေရစေရမည်ဟုပေးထားသည့်
ရွာသားတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်ဆန္ဒအတိုင်း ရရှိလာသည့် အကျိူးအမြတ်များအား ရင်းနှီးမြုပ်နှံ
စုဆောင်းထားရန်နှင့် ကျေးရွာ ဂုဏ်သိက္ခာပိုမိုကျော်ကြားလာစေရေးအတွက် ယခုကဲ့ သို့ ရွှေ
ယနေ့ ကာလပေါက်ဈေး ရွှေ ၁ ဂရမ်လျှင် ၄၀၀ ရင်မင်ဘီ ( ၆၂.၅၀ ဒေါ်လာ ) ခန့် ဖြင့် တွက်ပါ
က ရွာသားတစ်ဦးလျှင် ရင်မင်ဘီ ၄၀၀၀၀ ( ဒေါ်လာ ၆၂၅၀ ) စီ အလုံးအရင်း ရရှိခဲ့ ကြတာဖြစ်
အိမ်ထောင်စုတစ်စုအတွက်အများဆုံးပေးခဲ့ သည့် ရွှေပမာဏမှာ ၇၀၀ ဂရမ် ဖြစ်တာမို့ အကြမ်း
ဖျင်းအားဖြင့် ရင်မင်ဘီ ၂၈၀၀၀၀ ( ဒေါ်လာ ၄၃၇၅၀ ) ရရှိခဲ့ ပါတယ်...
ထိုမျှလောက်သော ရင်မင်ဘီ ၄၀၀၀၀ ခန့် တန်သည့် ရွှေများအား မည်သို့ စီစဉ်ကြပါသနည်း...
တစ်ချိူ့ သောရွာသားများကတော့ မိသားစုသားစဉ်မြေးဆက် ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် အမွေပစ္စည်း
အဖြစ် စီစဉ်ထားကြသလို လက်တွေ့ ကျကျလုပ်ဆောင်တတ်သည့် စိတ်ကူးရှိသူများကတော့ ထို
ရွှေထည်ပစ္စည်းများအား ၎င်းတို့ ၏သမက်လောင်းများအား ပေးဖို့ ကြံစည်နေကြတယ်လို့ ဆိုပါ
စုပေါင်းပိုင်ဆိုင် ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် အကျင့် သီလပြည့် စုံခြင်း၊ ရိုးသားကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း
ထိုကဲ့ သို့ သာဖြစ်နေပါက မည်သည့် ပါတီ၊ မည်သည့် စနစ်ဖြင့် အုပ်ချူပ်နေပါစေ အုပ်ချူပ်ခံ
တိုင်းသူပြည်သား၊ ရွာသူရွာသားများအနေဖြင့် တစ်စုံတစ်ရာပြောဆိုဝေဖန်ဆွေးနွေးနေမှာမ
အခုတော့ အဲဒီရွာသွားပြီး သမက်လောင်းအရွေးခံချင်စိတ်သာပေါက်နေမိတယ်...
Netizens are enviously eying the spoils of Changjiang village in Jiangsu after every one of the village’s 3,000 residents received 100 grams of silver and 100 grams of gold last week. Delivering onapromise made in 2009, the village’s party chief brought in over 600 kilograms of gold and silver via the Yangtze River for distribution.
What does one do with 40,000 RMB’s worth of gold? While some residents plan on turning it into an heirloom, others have more practical purposes in mind including giving the gold away to their future son-in-law.
Posted by Unknown | at 3:59 AM |0comments
Labels: news: china smack
အာရှသားများရဲ့ ထူးထွေသည့် အံ့ ရာသော်ဝ် ဆံပင်ပုံစံဆန်းများပါ...
ဒီအမောက်ကိုတော့ ဖြင့် ဘယ်သူမှ မမှီနိုင်ပြီ...
သူကတော့ တစ်ခြမ်းခင်း ဘဘကြီးကိုဂုဏ်ပြုထားတာပဲလား
အုံးမှုတ်ခွက်ကေ လို့ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုံးကတော့ ခေတ်စားခဲ့ ဖူးတယ်...
ဒီလိုဆံပင်ပုံစံမျိူးလည်း ၉၀ ကျော်ခုနှစ်များက ခေတ်စားခဲ ဖူးပါသေးတယ်...
ဟောင်ကောင် လမ်းသရဲ ဇတ်ကားများမှာပေါ့ ...
ပျားပိတုန်းကေသာ လို့ များခေါ်ရမလားပဲ...
သူ့ အကြောင်း သတင်းတစ်ပုဒ်တောင်ဖော်ပြခဲ့ ဖူးပါတယ်...
ဆံကေသာ ဆင်ဆံထုံးနဲ့ ဆာမူရိုင်း....
သူလည်းမီးဘေးအန္တရယ် တော်တော်စိုးရိမ်ဖို့ ကောင်းတယ်...
နောက်ထပ် ဟောင်ကောင်၊ တရုတ် ဂိုဏ်းစတား ဆံပင်ပုံဆံမျိူးဖြစ်နိုင်ပါတယ်...
အာဖရိက လူမည်းမတွေတောင် ငိုသွားရမယ့် ကျစ်ဆံမြီးပါပဲ...
Posted by Unknown | at 2:08 AM |0comments
Labels: / fun, photos: knowledge
သြစတြီးယန်းနိုင်ငံသား အလုပ်လက်မဲ့ တစ်ဦး ( အလုပ်လက်မဲ့ ထောက်ပံ့ ကြေးယူထားသူ
တစ်ဦးဖြစ်ဖွယ်ရှိပါတယ်...) ဟာ အလုပ်လုပ်နိုင်သည်အထိ ကျန်းမာသန်စွမ်းကြောင်းတွေ့ ရှိ
ကာ အလုပ်ပြန်လုပ်ရမှာစိုးလို့ ၎င်းရဲ့ ခြေထောက်ကို ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးဖြတ်ပစ်ခဲ့ ပါတယ်...
အလုပ်သမားရုံးတွင် ၎င်း၏ကျန်းမာရေး ကြံ့ ခိုင်မှုအခြေအနေနှင့် ပါတ်သက်ပြီး သွားရောက်
တွေ့ ဆုံရန် နာရီပိုင်းအလိုတွင် အသက် ၅၆ နှစ်အရွယ်ရှိ အမျိူးသားဟာ နေအိမ်ရှိ အလုပ်ရုံမှ
လျှပ်စစ် လွှစက်ဖြင့် ၎င်း၏ဘယ်ဖက်ခြေထောက်အား ခြေချင်းဝတ်အထက်မှနေ၍ ဖြတ်ပစ်ခဲ့ 
တာဖြစ်ပါတယ်လို့သြစတြီးယန်း အသံလွှင့် ဌာန အိုအာအက်ဖ် သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့ ပါ
၎င်းရဲ့ ခြေထောက်ပြတ်ကို မီးကင်စက် ( အစားအသောက်နွှေးသည့် စက် ) ထဲသို့ ပစ်ထည့် ခဲ့ 
လိုက်ပြီး ကားရုံသို့ ထော့ နင်းထော့ နင်းဖြင့် သွားကာ အရေးပေါ် သူနာတင်ယာဉ်အား ဖုံးဆက်
၎င်း၏ခြေထောက်အား အရေးပေါ်ပြန်လည်ခွဲစိတ်ကာ ဆက်ပေးရန်ကြိုးစားခဲ့ သော်လည်း မ
သူတို့ နိုင်ငံမှာ အလုပ်မလုပ်လည်း အလုပ်လက်မဲ့ ထောက်ပံ့ ကြေးနဲ့ စားနိုင်၊ နေနိုင်တာမို့ အခု
လို အပျင်းကြီးလွန်းတဲ့ စိတ်တွေဝင်လာတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်...
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ုအလုပ်လုပ်ရမှာစိုးလို့ ကိုယ့် ခြေထောက်ကိုယ်ဖြတ်ပစ်တဲ့ အထိတော့ အဲဒီလူ
ပျင်းလွန်းတာ အံ့ သြစရာပါပဲ...
ဒါကြောင့် လည်း သတင်းထဲပါတာပေါ့ ဗျာ...
Labels: news: reuter.au.com
KotaKoti (Dakota Rose). Girl Who Looks likeaDoll
Meet Dakota Rose aka KotaKoti,agirl who looks likeadoll.
သူကလေးကတော့ တစ်ကယ့် ကြွေရုပ်ကလေးလိုလှပချောမွေ့ ပြီး ချစ်စရာကောင်းသူလေးပါ...
အမေရိကန်နိုင်ငံကလို့ ထင်ရပါတယ်... ဒါကိုတာမနှင်းဆီ သို့ မဟုတ် ကိုတာကိုတီ လို့ အမည်
ဟန်မူယာမခို့ တရို့ နဲ့ ...
အရုပ်ကလေးနဲ့ တူတဲ့ ....
သူ့ အလှမှာ မေ့ မြော....
ရင်ကို " ဒိန်း " ကနဲဖြစ်စေမယ့် ညှုိ့ ယူဖမ်းစားချက်တွေနဲ့ ...
ရထားလမ်းဘေးက အလေ့ ကျတောရိုင်းပန်း အလှကလေးပေါ့ ...
ရင်ဆိုင်မယ် အသင့် လို့ များ ရည်ညွှန်းလေသလား...
ဒီလိုတော့ ဖြင့် မလုပ်နဲ့ ကွယ်...
မြင်ရသူတွေ ရင်ပူပြီး...ရေငတ်လာလိမ့် မယ်...
ပီဘိ တကယ့် အရုပ်မလေးလို...
ကမ္ဘာကုန်ကျယ်သရွေ့ ဘယ်မေ့ လိမ့် မလဲ...
ကြည်သောမျက်နှာ...ချိူသောအပြုံးတွေနဲ့ မို့ ...
နင့် ကြောင့် ငါ့ ကမ္ဘာ " ပြား " ခဲ့ ရပြီ...
မင်းဆံနွယ်ကလေးတွေ...ကိုယ်သပ်တင်ပေးနိုင်မယ့် အခွင့် အရေးအတွက်...
တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ ငါ စီးချင်းထိုးပါ့ မယ်...
ဒီအကြည့် ဒီမျက်လုံးလေတွေကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ...
Posted by Unknown | at 1:26 AM |0comments
Labels: photos: fun